🥇 ▷ Cycloramic, barnaamijka 'iPhone' kaas oo sawir toos ah looga qaadayo 360º sawirro ✅
Cycloramic, barnaamijka ‘iPhone’ kaas oo sawir toos ah looga qaadayo 360º sawirro
Cycloramic, waa barnaamij ay iPhoneku si otomaatig ah u qaadi doono sawirro 360º ah
Codsiga Cycloramic wuxuu yimaadaa App Store, waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad sawirro si toos ah uga qaadatid moodooyinka iPhone ee kala duwan. Nooca Cycloramic ee loogu talagalay iPhone 6 ee cusub ayaa hadda laga heli karaa bilaash. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan codsigan, nala daawo, soona degso.
Si toos ah sawirro yaab leh uga qaad sawirro muuqaal ah, iPhone 6, 5s, 5c iyo 5, oo leh Cycloramic
Cycloramic waa codsi loo soo saaray iPhone, kaas oo si buuxda uga faa’iideysanaya qalabka dhaqdhaqaaqa ee qalabka iyo, marka la eego iPhone 6, sidoo kale xarkaha darbiga kaas oo lagu soo daray sanduuqa oo uu aaladda ku nasan doono si ay isu beddeli karto si ay awood ugu yeelato inay si otomaatig ah u qaaddo sawirrada panoramic.
Soosaarayaasha barnaamijkan, Egos Ventures, mabda ‘ahaan waxay soo diyaariyeen barnaamijka Cycloramic si loogu wareejiyo iPhone 5, 5c iyo iPhone 5s nafsadooda, iyagoo ka faa’iideysanaya geesaha toosan. Si kastaba ha noqotee, imaatinka iPhone 6, Apple waxaan beddelayaa qaabeynta qalabka ka dhigaya geesahiisa wareegsan, sababtan awgeed soo-saarehu wuxuu ku fikiray xalka qarashka eber ee isticmaaleha, adeegsiga adabtarada awoodda cusub ee cusub. aaladaha dhamaadka sare ee Apple.
Waa muhiim inaad fiiro gaar ah yeelatid Barnaamijkan ayaa la jaan qaadi kara oo keliya iPhone 6, xilligan la joogo kuma jiro iPhone 6 Plus, qalabkuna wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qaato labada sawir ee 360º panoramic, iyo 180 ° sawirro, kan dambe waxaa lagu sameyn karaa 3 ilbidhiqsi oo keliya. Sidoo kale, sawirradan, waxaad ku sameyn kartaa fiidiyowyo 15-ilbiriqsi oo gaagaaban.
Astaamaha Cycloramic ee qalabka macruufka
Barnaamijkan waxaad ku raaxeysan kartaa astaamaha ugufiican ee dalabka si aad uhesho sawirro muuqaal ah, kuwaas kamid ah waxaad ka heli kartaa
Xalka ugu sarreeya ayaa diyaar u ah sawirrada sawirrada.
Beddelaha sawirrada muuqaalka fiidiyaha ah (240p, 360p, 480p, 720p, 1080p).
Qayb ka mid ah aaladaha lagu guuleysto abaalmarinta si loo saxo loona hagaajiyo sawirradaada.
Appka kaliya ee u beddelaya taleefankaaga kamarad gacmo-la’aan ah.
U soo dejiso Cycloramic iPhone 5, 5c, 5s iyo iPhone 6
Haddii aadan haysan arjigan qalabkaaga macruufka ah, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo adeegsanaya xiriirinta tooska ah ee ka soo degsiga, kana soo degso App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
Cycloramic for iPhone ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 8.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Jarmal, Shiinees fudud, Kuuriya, Faransiis, Ingiriis, Talyaani, Jabbaan, Boortaqiis, Ruush, Turki.